Sida waxbarashada booliska lagu soo galo oo dood keentay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sida waxbarashada booliska lagu soo galo oo dood keentay
La daabacay tisdag 27 december 2016 kl 12.20
Dhaleeceen loo soo jeediey imtixaannada ciidanka boliiska
Saraakiil boliis oo jaamicadda ka qalin-jebisey. sawir: Sawirle: PONTUS LUNDAHL / TT /
Joojinta imtaaxan booliska laga qaado oo dhaliyey eedayn dawlada loo jeediyo.
Afar haayadood oo ay kamid yihiin haayada xeerilaanta iyo haayada dabagalka iyo sharci dhawrista haayadaha dowlada (Riksrevisorn) aayaa eedayn u soo jeediyey qorshaha dawladu ku doonayso in lagu joojiyo imtixaanka qofnimada iyo garaadka ee ardeyda booliska laga qaado.
Stefan Annell oo ah qof cilminafsiga ku takhalusay oo baarisna ku sameeyey imtixaankan qofnimada iyo garashada ee booliska laga qaado ayaa aaminsan in imtixaankan iyo tijaabinta awooda qofka ay yihiin waxa ugu fiican ee sheegi kara in qof booliska ku booyahay iyo in kale.
Imtixaankan ayaa lataliyaha dooladu soo jeediyey in la joojiyo si ay qaadashada ardeyda ee waxbarashada boolisku ula mid noqoto jaamacadaha kale. Petra Lundh oo ah lataliyaha dawlada ee soo jeediyey rayigan ayaa sidan ku dooday.
- Tani jaamacada booliska ayey hoos udhigeysaa. Majirto jaamacad kale oo sidan lagu gala. Arinkaas waano ka sineeyn kooxdayadu, waxa rayi ka dhiibtay aqoonyahano jaamacadaha ka socda iyo qaar booliska ka socda.
Booliska ayaa iyagu aaminsan in shahaadada oo keli ahi anay kufilayn kala shaandheeynta ardeyda dalbata booliska. Lena Nilz oo ah gudoomiyaha ururka booliska ayaa tidhi.
- Shahaado fiican mar walba lama mid aha boolis fiican. Waxa jiri kara qof boolis aad u fiican noqon kara laakiin aan shahaado fiican iskuulka sare kala iman. Waa taas sababta aan u dooneyno waddo kale oo lagu soo galo booliska.